Vanuatu နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ဗနူအာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ Vanuatu တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစား Vanuatu ရှိနိုင်ငံသားအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
နိုင်ငံသားခံယူသူသည်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသောနိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားခြင်း၊ နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူချက်ဗီနူအာတီတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒုတိယနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားခြင်းအားနိုင်ငံသားခံယူထားခြင်း၊ , အမြဲတမ်းနိုင်ငံသားခံယူထားသောနိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသား၊ ယာယီနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသူ၊ နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံသားခံယူထားခြင်း၊ နိုင်ငံသားခံယူထားခြင်း၊ နိုင်ငံသားခံယူထားခြင်း၊ Vanuatu တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်မှု၊ Vanuatu တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှစ်ဆ၊ Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Vanuatu တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Vanuatu ရှိစီးပွားရေး Residency အစီအစဉ်များ၊ Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် Residency၊ Vanuatu အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ pas Vanuatu ရှိအားကစားအစီအစဉ်များ၊ Vanuatu ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒုတိယအစီအစဉ်၊ Vanuatu ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်ခု၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့် Vanuatu ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Vanuatu ရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Vanuatu တွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Vanuatu ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ Vanuatu ရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာ၊ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာ၊ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ, Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာ program, Vanuatu တွင်ဒုတိယရွှေ visa, Vanuatu တွင်ဒုတိယ visa visa, Vanuatu ရှိ gold visa၊ နိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီ Vanuatu တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ Vanuatu ရှိ visa ဗီဇာ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဗင်နူတူ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ဗနူအာ၌အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 150,000
ဗနူအာတွင်အခြေခံကျကျကျွန်းလေးကျွန်းနှင့်ကျိုးနွံသောကျွန်းပေါင်း ၈၀ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၆၀ ခန့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ VSA လုပ်ငန်းများကိုအများအားဖြင့်လတ်တလောနှစ်နှစ်ဖြစ်သောကြောင့်ရပ်ကွက်ဘာသာစကားပြင်ဆင်ခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောဘာသာစကားပြင်ဆင်မှု (Bislama) ကိုလုပ်ငန်းစတင်ချိန်တွင်အရေးကြီးသောအချိန်တွင်နောက်ဆက်တွဲတွေ့ဆုံခြင်းနှင့်အတူပြုလုပ်မည်။ အနီးအနားရှိဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုနားလည်ခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်းတစ်ကျွန်းမှသည်နောက်တစ်ကျွန်းသို့စတင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အခင်းအကျင်းများသည်ရိုးရှင်းစွာနီးကပ်လာသည်မဟုတ်ပါ။ သင်နှင့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေနှင့်လိုအပ်သည်များကိုမဆန်းစစ်မီမိသားစုနှင့်အနီးအနားရှိကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Vanuatu သည်သင်၏စံပြပရဒိသုအပူပိုင်းဒေသကျွန်းစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးသွားများမစီးနိုင်သည့်အပြင်ယခုမှစပြီး Vanuatu - လာရောက်လည်ပတ်ရန်ဆွဲဆောင်မှု ၁၀ ​​ချက်ရှိသည်။ အချို့သောသင်္ဘောများသည်အဓိကကျွန်း၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်သက်တမ်းတိုတောင်းသောမှတ်တိုင်များပြုလုပ်ကြသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ဖူဂျီနှင့်နယူးကာလီဒိုးနီးယားတို့ကဲ့သို့ဗနူအာတူသောကျွန်းများသည်တစ် ဦး ချင်းရေဒါတွင်မရှိကြချေ။ ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကျွန်းများ၏သက်သက်သာသာမှုနှင့်ပေါင်းစပ်သည့်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Vanuatu က ballpark ကနေဝင်တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ Vanuatu သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိပြီးသြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့နှင့်မဝေးလှပါ။ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားသည်အနောက်တောင်ဖက်သို့ ၂၃၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိပြီးဖီဂျီသည်အရှေ့ဘက်ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ဖြစ်သည်။ ကျွန်းပေါင်း ၈၀ ကျော်ရှိပြီးလူ ဦး ရေ ၂၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ Vanuatu တွင်မြင်တွေ့ရမည့်အရာအမျိုးမျိုးကို Vanuatu ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်စကားပြောရန်အချက်တခုလုပ်ပါ။
Vanuatu ၏တစ် ဦး ချင်းစီလုံးလုံးလြားလြားသာယာသောဖြစ်ကြသည်။ Port Vila အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိစီးပွားရေးကဏ္ at များ၌သူတို့လည်ပတ်ရန်နှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စကားပြောရန်တစ်နေ့တာ၏အချိန်ယူကြသည်။ Port Vila သည်မြို့တော်ဖြစ်သော်လည်းဆိပ်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီးလှပပြီးအခြေခံကျသောမြို့ငယ်လေးအဖြစ်အမှန်တကယ်ပြသခဲ့သည်။ Malekula ကျွန်းသည်ဘဝပုံစံနှင့်ဗနူတူ၏စည်းဝေးကြီးများကိုများစွာနားလည်သည်
ကျွန်းများတစ်ခုလုံးမှဝေးကွာသောနေရာမှအချို့လူများအတွက်ကဒ်ဆွဲခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ဂေါ်ဒွန်သည်သူ၏ PADI ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးရေနစ်မြုပ်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဤထူးခြားသောရေတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည့်အပျက်အစီးများစွာနှင့်လည်းပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါများ၏အကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်။ ရေကူးသူများအတွက်စင်ကြယ်သောအခြေအနေများတွင်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ အပျော်စီးသင်္ဘောသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရွက်လှေကိုနှစ်သက်စေရန်အဓိကကြိုးစားသည်။ သင်ဒီမှာ Vanuatu ကျဆင်းအောင်အကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ Vanuatu တွင်ဘယ်နေရာသို့ကျဆင်းသွားမည်ကိုရှာဖွေပါ။
၃။ Bungee ကိုစပြီးဘယ်နေရာကိုသွားပါ
ပင်တေကုတ္တေကျွန်းသည် Bungy တောင်တက်ခြင်း၏မူလအစဟုနာမည်ကြီးသည်။ အေဂျက် Hackett သည်ပင်တေကုတ္တကျွန်းကျွန်းပေါ်ရှိမြေပေါ်ခုန်ချခြင်းမှခုန်ပေါက်ပြေးလွှားရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ Aprilပြီနှင့်ဇွန်လတို့တွင်စနေနေ့တွင်ကျွန်း၏တောင်ဘက်အပိုင်းရှိအမျိုးသားများသည်အမြင့်ပေ (၂၀ မှ ၃၀ မီတာ) ခန့်တွင်အမြင့်များမှခြေထောက်ချည်ထားသောအပင်များမှခုန်ထွက်လာကြသည်။ ရရန်အတန်ငယ်ခဲယဉ်းသော်လည်း, သင်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ထုံးစံကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောဖြစ်ရပ်၌ပြုလေ့ရှိပါတယ်။
၄။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးထားပါ
ဘိုးဘွားဗာနူးတူ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်လူမှုရေးလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုတွေ့မြင်သင့်သည်။ မီးပွိုင့်သည်အမှန်တကယ်ပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာမြို့သူမြို့သားများအနေဖြင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ အပင်များစားသုံးခြင်းနှင့်အစားအစာသိုလှောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အဖြေများရလိမ့်မည်။
၅။ Vanuatu ၏ရေတံခွန်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ
- Mele ကက်စကိတ်။ Efate ကျွန်းပေါ်မှာ, သင်ဤရေတံခွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ မြင်ကွင်းထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးရေပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီးအတွေ့အကြုံသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။
ဤအချက်သည်အဓိကဖြစ်သည်။ Mele Cascades မှထွက်ခွာသွားသည့်အဖွဲ့အစည်းက“ သင်သည်နေ့နှင့်တစ်နေကုန်မနေရ၊ ထိုအချိန်တွင်သင်အသက်ရှင်မည်မဟုတ်” ဟုပြောသည်။ ၎င်းတို့ကို Edge Adventure ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီးထိုရေတံခွန်များကျဆင်းခြင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံသေများကိုမပြုလုပ်သောကြောင့်အထောက်အပံ့မပေးပါ။
တည်းခိုနေထိုင်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့တာပတ် ၀ န်းကျင်များ
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားချက်ပြုတ်ရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့ရုံးများနှင့်အခြေခံ၊ Port Vila နှင့် Santo တို့တွင် ၂၄ နာရီပါဝါ၊ ဖုန်းများ၊ မြို့ပြရေကိုချောချောမွေ့မွေ့ချဉ်းကပ်နိုင်ခြင်း၊ ဝဘ်၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အများပြည်သူသုံးကားဘောင်များ၊ စျေးဆိုင်များနှင့်လူကြိုက်များသောကွန်ယက်များသို့ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ သင်တစ်နေရာရာကိုအခြေပြုထားသည့်အခွင့်အလမ်းတွင်သင့်တွင်ထိုအရာများမရှိပါ။ Vila နှင့် Santo နှစ်မြို့လုံးရှိမြို့ပြရေသည်ရေကိုကယ်လ်ဆီယမ်အလွန်မြင့်မားစေသည့်ကြားမှသောက်ရေကိုကာကွယ်ပြီးကာကွယ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သောက်သုံးခြင်းမတိုင်မှီပူဖောင်းဖြစ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဗာနူးတူသည်အလယ်အလတ်အစက်အပြောက်နှင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအဝတ်အစားများသည်မသင့်တော်ပါ။ အမျိုးသားများအတွက်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီရှည်၊ ဒူးအရှည်ဘောင်းဘီတိုများနှင့်သာမာန်ရှပ်အင်္ကျီများရွေးပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်၊ ဆင်မြန်းမှုများ၊ စကတ်များနှင့်ရှပ်အင်္ကျီများကိုပုံမှန်ဝတ်ဆင်ကြသည် - လက်ပြတ်ရှပ်များသည်ထပ်မံခံထိုက်သည်။ အထူးသဖြင့်သမားရိုးကျအချိန်အခါများ၌သွားသောအခါအရေပြားကိုဒူးထက်မဖော်ပြရန်ကြိုးစားပါ။ အပန်းဖြေစခန်းမဟုတ်သောနေရာများတွင်ရေကူးနေစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများသည်ဘောင်းဘီတိုများ၊
Jungle fever သည် Port Vila အပြင်ဘက်ရှိ Vanuatu ဒေသ၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်တည်ရှိပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးသည်ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုအသုံးပြုရမည်။ ကွဲပြားသောအကာအကွယ်များကိုအကြံပြုထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အပြင်ဘက်ရှိညအချိန်တွင်တွားတတ်သောတွားသွားသတ္တဝါတုန်လှုပ်စေသောနှင့်ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်ရှည်နှင့်ဘောင်းဘီရှည်နှင့်သင်ကတောတွင်းအဖျားဇုန်များ၌ကျန်နေမည်ကိုခြိမ်းခြောက်သောခြင်ထောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Port Vila အပြင်ဘက်တွင်ရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း Vanuatu တွင်ဘဏ်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သင်ဗင်နူတူး၌သင်နှင့်တစ်လမှတစ်လနေထိုင်သောငွေလွှဲခြင်းများကိုသင်ပြုလုပ်ပြီးပါကစေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက်ရပ်ကွက်တံခါးဖွင့်ပါမည်။ Port Vila သို့မဟုတ် Luganville ရှိ ANZ သို့မဟုတ် Westpac အကောင့်များရှိသည့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် Check cards ကိုသုံးနိုင်သည်။ အနီးအနားမှာပိုက်ဆံ Vatu ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကုန်သွယ်မှုနှုန်းများအတွက် XE.com သို့လာရောက်ပါ။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဗာနူအာ
$ 100,000 ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူရရှိသောနိုင်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ဖြင့် VCP နှင့် DSP အစီအစဉ်များကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံသားခံယူနိုင်သည်။
Dual နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပြုသည် Vanuatu ၏နိုင်ငံသားများအတွက်ခွင့်ပြုသည်
ဘာကြောင့် Vanuatu ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်သင့်တာလဲ
ဗနူအာသမ္မတနိုင်ငံတွင်သြစတြေးလျ၏အရှေ့ဘက်ရှိကျွန်း ၈၀ နီးပါးရှိသည်။ ၎င်းသည်အပူပိုင်းပရဒိသုတစ်ခုသာမကဗြိတိသျှဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်သင်၏ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ ဥရောပနှင့်အာရှနိုင်ငံများသို့သင် ၀ င်ခွင့်ကိုထုတ်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရှာဖွေလျှင်၊ ဗာနူတူသည်၎င်း၏တည်ငြိမ်သောဘဏ္systemာရေးစနစ်၊ အခွန်အခအခြေအနေနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများကြောင့်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ မှီခိုနေသောအသက် ၂၅ နှစ်အောက်ကလေး ၂၅ နှစ်နှင့် ၆၅ နှစ်ကျော်မှီခိုနေသောမိဘများသည်သင်နှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးသည်ဗနူတူနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။
နိုင်ငံသား Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
သင်၏လျှောက်လွှာကိုသင်၏အေးဂျင့်ထံသို့တရားဝင်ပတ်စ်ပို့နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုမရှိသည့်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ သင်၏နောက်ခံရှင်းလင်းမှုပြီးနောက်လျှောက်ထားသူအားလုံးအတွက်အစီအစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်သည်။ တွက်ချက်ပြီးနောက်သင်နိုင်ငံသားလျှောက်လွှာစာရွက်များကိုလက်မှတ်ထိုးသည်။
သငျသညျကြိုတင်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ 30 ရာခိုင်နှုန်း၏သိုက်ငွေသွင်းရန်ရှိသည်။ ငွေပြန်အမ်းလို့မရဘူး ငွေပေးချေပြီးနောက်လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရန်ရက်ပေါင်း ၃၀-၆၀ ကြာသည်။
သင်၏လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးနောက်သင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီးဗာနူးတူနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်သင်ကျန်ရှိသော ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးဆောင်သည်။ သစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျိန်ဆိုဖို့တိုင်းပြည်ကိုသွားရလိမ့်မယ်။
Vanuatu Development Support Program သို့လှူဒါန်းရန်ဒေါ်လာတစ်သိန်းလေးသောင်းဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုသင်ခံစားခွင့်ရှိသည်။ သင်တစ် ဦး တည်းလျှောက်ထားပါကတစ်ချိန်ကလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ပြီးသင့်အားတစ်သက်တာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစု ၀ င်များကိုလည်းခေါ်ဆောင်လာပါကအပိုထပ်ဆောင်းအခကြေးငွေများကျသင့်သည်။
> မိသားစုလေးယောက်အတွက် - ခင်ပွန်းနှင့်ကလေးနှစ်ယောက် - ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀
> နောက်ထပ်ကလေးတစ် ဦး စီအတွက် - ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀
> အသက် ၁၈ နှစ်အောက်နှင့် ၂၅ နှစ်အောက်အသက်ပိုငယ်သည့်မှီခိုသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူကလေးတစ် ဦး စီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀
> အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သည့်နောက်ထပ်မှီခိုနေသောမိဘတစ် ဦး စီအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀
တိုင်းပြည်သည်ပြီးပြည့်စုံသောအခွန်အခနေထိုင်ခွင့်အခြေအနေများကိုပေးသည်။ ဝင်ငွေခွန်၊ အိမ်ခြံမြေအခွန်များသို့မဟုတ်အမြတ်ခွန်ခွန်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် Vanuatu များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဗနူအာ ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုဗာနူတူနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ရန်၊ ဗင်နူဝါးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Vanuatu မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Vanuatu မှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာသို့မဟုတ် Vanuatu သို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီသည်။ ဗာနူးတူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဗနူအာတွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အခြားအရာများစွာတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်ဘဏ္planningာရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ငါတို့တတ်နိုင်မှတဆင့် Vanuatu ဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ Vanuatu အတွက် ၀ င်ငွေကောင်းသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊ Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသားနှင့် Vanuatu အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
နိုင်ငံသားအဖြစ်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဗင်နူဝါးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဗင်နူဝါး၌ရွှေဗီဇာ။
ဗင်နူတူနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
Vanuatu မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ဗင်နူဝါး၌ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ဗနူအာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ဗင်နူတူနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
Vanuatu မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
အိမ်ခြံမြေမှတဆင့် Vanuatu ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် Vanuatu တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှကောင်းသောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်သူတို့ပြုလုပ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာသွားမည်ကိုရှုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Vanuatu ရှိကောင်းမွန်သောအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး Vanuatu ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
Vanuatu ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ Vanuatu အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Vanuatu နိုင်ငံသား
Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Vanuatu သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဗင်နူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ဗင်နူတူသို့မဟုတ်ဗနူတူသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအား ၀ န်ထမ်းများအား Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီနှင့်အစီရင်ခံစာမှပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
Vanuatu အတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်မိလိမ့်မည်။
Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူချက်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်တမန်တော်ဖြစ်သည်။ Vanuatu နှင့်ရွှေဗီဇာတို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များအတွက်နိုင်ငံသားခံယူရန်စာရွက်စာတမ်းများကို Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ် Vanuatu ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Vanuatu များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ကုန်ပစ္စည်းများအားကုန်ပစ္စည်းများသို့ရောင်းချရန်နှင့်ဗင်နူတူသို့ရောင်းချရန်ခွင့်မပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Vanuatu များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ Vanuatu တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ် Vanuatu မှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Vanuatu များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် Vanuatu တွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဗနူအာ Vanuatu ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Vanuatu များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ Vanuatu ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဗနူတူတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နေသောဗာနူတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဗင်နူတူအားထောက်ပံ့မှုမရပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဗနူအာ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဗနူအာ Vanuatu ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဗာနူအာ Vanuatu ရှိညစ်ညမ်းစာပေများကိုရောင်းဝယ်သူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား Vanuatu အတွက်ရှေ့ရပျ Vanuatu ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည် Vanuatu နှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာအားအတည်ပြုခြင်းအတွက် Vanuatu ရှိအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့် Vanuatu ၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားသည်ဗနူတူအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ ၀ င်ငွေဖြင့် Vanuatu အတွက်အတွေ့အကြုံရှိပြီး Vanuatu အတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးပေးသည်။
သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိပြုထားသော Vanuatu ကိုင်တွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးရှေ့ရွက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဗင်နူးဝါးမခံယူမီနှင့်အတည်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဗနူတူကိုစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားစီပွားရေးတွင် Vanuatu အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ဗင်နူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအား Vanuatu သို့တွက်ချက်ပါ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကို Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအားတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များစသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Vanuatu အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားကုန်ကျမှုများပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဗနူအာ
ယာယီနေထိုင်ခွင့် Vanuatu ၌တည်၏
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဗနူအာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဗာနူးတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဗနူတူနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ဗာနူးတူ၌စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင်ဗင်နူတူနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗင်နူတူနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုဗင်နူတူအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောငါတို့အားဗင်နူတူနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဆိုင်ဖွင့်စေသည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ကျော်လွန်၍ Vanuatu အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဗင်နူတူနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်အကူအညီပေးခြင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (Vanuatu တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
Vanuatu သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Vanuatu ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် Vanuatu ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incu သင်အဘို့, Vanuatu အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဗနူတူ၌ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Vanuatu ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ဗနူူတူ Vanuatu တွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ Vanuatu အတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
Vanuatu ရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ Vanuatu ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဗင်နူဝါး၌နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Vanuatu အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Vanuatu အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ Vanuatu များအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, Vanuatu အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
Vanuatu ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
Vanuatu တွင် setup ကိုစီးပွားရေး
နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက် Vanuatu သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဗာနူအာ.
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ IT ဖြေရှင်းနည်းတွေကို Vanuatu မှာပေးတယ်
Vanuatu တွင် web ဒီဇိုင်း
Vanuatu တွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Vanuatu အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
Vanuatu ရှိ App Development
Vanuatu အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Vanuatu ရှိ SEO
ကျွန်ုပ်တို့သည် Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Vanuatu အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ Vanuatu အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များလည်း Vanuatu တွင်ရှိသည်။ Vanuatu တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားသည် Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးသည့်အဖြေများပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဗနူးတူသို့နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားသည်၊ ဗနူတူ၌သင်နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်ရန် Vanuatu အတွက်ရှေ့နေအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်လိုအပ်သည်။ သင်ဗင်နူတူသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဗင်နူတူသို့လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ Vanuatu အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါက Vanuatu ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုဗွuနူတီကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ဗင်နူတူ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုကိုဗနူအာသို့သတ်မှတ်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဗနူတူ၏စီးပွားရေးတွင်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှ Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ Vanuatu ၌တည်၏။
Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း Vanuatu ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ဗာနူးတူ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်မှု | Vanuatu အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဗင်နူဟုနိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဗာနူတူစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဗနူတူ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဗနူတူနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ နိုင်ငံသားခံယူခြင်းအားဗင်နူဟုနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်း၊ ဗင်နူဝါးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်ဗင်နူတူနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဗင်နူတူနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဗင်နူတူနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အကောင်းဆုံးမှာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီး Vanuatu ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများနှင့် Vanuatu ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
Vanuatu အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု Vanuatu ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Vanuatu ရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Vanuatu အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး Vanuatu အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်သည်ဟုဗင်နူတူနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဗင်နူဝါးတားအကောင်းဆုံးရှေ့တန်းရှေ့နေများနှင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဗင်နူတူနိုင်ငံရှိဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဗင်နူဝါးမှာအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတဆင့်
Vanuatu အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု Vanuatu ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ Vanuatu ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ Vanuatu ရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ Vanuatu အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားဖြစ်၊ အိမ်ခြံမြေစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဗင်နူတူနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဗင်နူတူသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားသည်။ Vanuatu ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ Vanuatu ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့် Vanuatu အတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ Vanuatu ရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Vanuatu ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် Vanuatu အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ။
Vanuatu အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ Vanuatu ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ Vanuatu အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Vanuatu နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
နိုင်ငံသားခံယူခြင်း၏တန်ဖိုးမှာ Vanuatu သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူတစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Vanuatu သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုသာခံယူခြင်းဖြစ်ပြီး၊
နိုင်ငံသားပြုမှုကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံသားသည်အာရှမှဗာနူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်အာဖရိကမှဗာနူးတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဗင်နူတီသို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ တောင်အမေရိကမှဗင်နူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှဗင်နူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဗန်နူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဗင်နူတူသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ သီရိလင်္ကာမှဗင်နူတူနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ နီပေါမှဗင်နူတူသို့နိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်အိန္ဒိယ၊ ယူအေအီးမှဗနူအာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်။
link ကိုမှ Vanuatu ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဗာနူးတူနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်